I-anesthesia ngesikhathi sokulethwa: ngokomzimba, kwengqondo, imithi
Njalo owesifazane uba ngumama. Ngesikhathi sokukhulelwa, intombazane ilindele ukuzalwa kwengane. Nokho, ngaphezu kokulindela okujabulisayo, cishe wonke umuntu uzwa ukwesaba ukubeletha. Abanye bakhuluma ngakho ngokuzwakalayo, futhi abanye bahlale bezodwa, kepha iqiniso lihlala.
Namuhla ngenxa yemithi yesimanje, ungathatha izindlela eziningana zokwelapha izinzwa ngesikhathi sokubeletha. Kodwa akuzona zonke izindlela ezifanayo kubantu abafanayo. Ngakho-ke, kumaforamu ungavame ukuhlangana nombiko wokuthi i-anesthesia ayizange isebenze futhi ubuhlungu bube buzwa. Abesifazane abaningi bayesaba.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ubuhlungu bokubeletha buyimvelo. Futhi ukwesaba nakho kuvamile. Kodwa inkinga yonke yilabo besifazane abazayo "bavuselela" ukwesaba kwabo okuvela ngaphandle - bafunda ezinkundleni izibuyekezo ezihlukahlukene nezindaba ezimbi zokukhathazeka okubuhlungu ngesikhathi sokubeletha. Odokotela abaningi baqinisekisa ukuthi lezi zindaba zinyanyiswa futhi owesifazane ngokwakhe ubeka imizwa engaphambi kokusetha kusengaphambili. Ngesikhathi esifanayo, ivaliwe ngokwengqondo futhi ayilaleli amakhansela nababelethisi. Ngenxa yalokho, akuyona nje ukukhunjulwa kwezinhlungu, kodwa futhi ukuzalwa kwemvelo okuzaliswa inqubo kuphazanyiswa.
Indlela yokwenza kulesi simo? Okokuqala, udinga ukuzola futhi ufunde ukuthi imithi yesimanje inikeza izinketho eziningana ze-anesthesia ngesikhathi sokubeletha. Futhi, kubalulekile ukuqonda ukuthi yikuphi ubuhlungu bokuzalwa nokuthi buvelaphi. Lokhu kuzokusiza ukususa ukucindezeleka kwengqondo, okubalulekile.
Kungani kukhona ubuhlungu ekubelethweni?
Okokuqala, sizokuthola, yini imbangela yokuqala kokukhipha isisu ekubelethweni. Imfuneko eyinhloko yokubukeka kobuhlungu obukhulu phakathi nesikhathi sokuqhaqhazela kungukuqhekeka kwemisipha. Ngenxa yalokhu kunciphisa, i-cervix ivuliwe. Futhi ukuzwa kwemizwa kuphakama futhi ngenxa yezinkinga zemigudu esekela isibeletho. Ukuzizwa okunjalo kwemizwa kunamandla kakhulu futhi kungakhipha amahora amaningi angajabulisayo ekuzaleni intombazane.
Lapho umlomo wesibeletho uvula futhi ingane iqala ukuhamba emgodini wokuzalwa, ubuhlungu obukhulu buyenzeka ngenxa yenkinga enamandla kakhulu yekhanda lomntwana ezintanjeni ezithambile zesikhumba, i-perineum kanye nethambo. Ngendlela, uma isimiso sezinzwa sesifazane siqeqeshwe, ubuhlungu buba cishe engabonakali emizamweni, kuphela umuzwa wokucindezela oqinile uhlala. Kodwa akunakwenzeka ukuthi abesifazane abaningi esikhathini esidlule babehlanganyele ekuqeqeshweni isimiso sabo sezinzwa, ngakho-ke ubuhlungu ekugcineni abukwazi ukugwema.
Izindlela zokwelapha ezenzelwe i-analgesia yokubeletha
Uma ubuhlungu bukhulu kakhulu futhi owesifazane engasakwazi ukukwenza, udokotela angakunika izidakamizwa zezokwelapha kuwe.
Ama-tranquilizers ahloswe ukutholisa isimiso sezinzwa somuntu wesifazane. Bayosiza ekuqedeni umuzwa wokukhathazeka, ukwesaba futhi kunciphise umbono obunzima wobuhlungu. Ngezinye izikhathi owesifazane, ngaphansi kwethonya lemithi enjalo, uthola ngisho nokulala kancane ngezikhathi eziphakathi kwezingqinamba.
Izidakamizwa ezinjalo zenza ngokuhlukile. Bangela ukuphumula okuqhubekayo nokuqinile kwazo zonke imisipha. Lokhu kuvumela ukudalulwa okusheshayo nokuphumelelayo kwesibeletho.
Kusho ukuthi i-anesthesia
Izidakamizwa ezinjalo zinezimo eziyinkimbinkimbi emzimbeni: zikhulula imisipha, icindezele ingqondo iphinde icindezele ukuzwela kokuzwela ubuhlungu. Zisetshenziswa kulawo maqiniso ngenkathi ngesikhathi sokubeletha okuthile kuhamba kahle.
Unomthelela omkhulu emzimbeni hhayi kuphela umama, kodwa futhi nomntwana ozayo. Ngakho-ke, zisetshenziswe ngokungajwayelekile futhi, kuphela ezimweni ezimbi kakhulu.
Izinhlobo ze-anesthesia nature
Ngalolu hlobo lwe-anesthesia, i-anesthetic ifakwe ku-tishu esithambile emnyango wesifazane. Ngokuvamile kuvame ukusetshenziswa njenge-anesthetic emva kokubeletha (lapho usebenzisa izigxobo) noma ngaphambi kokusika i-perineum. Ukuqhathaniswa nokusetshenziswa cishe cishe, ngaphandle kokubekezelelana komuntu ngamunye.
I-epestural anesthesia ivame kakhulu namuhla. Isidakamizwa esikhethekile sijojowe ngaphakathi, esivimbela isisindo somswakama. Ngenxa yalokho, kutholakala ukulahlekelwa okuphelele komzwelo kuwo wonke umuntu wesifazane, ngaphandle kobulili obungaphandle.
I-anesthesia ihlukaniswe ngama-subspecies amaningana, kuye ngokuthi indawo yokuphatha izidakamizwa:
transmezhpromnezhnostnaya anesthesia - ithunyelwa nge-crotch;
i-transvaginal - iphinde isetshenziswe nge-perineum. Isetshenziselwa uma usebenzisa i-forceps noma esikhathini sesibili sokubeletha okungahambi kahle;
i-anesthhesia yomgogodla wesifunda - kusiza ukukhipha inselele yonke ingxenye engezansi ye-trunk. Isetshenziselwa ukuhlinzekwa okuhle kokujwayelekile noma ukulethwa isikhathi eside.
Kukhona okunye okungahambisani nokusetshenziswa kwesinye isibuko esifanayo:
i-gestosis - i-toxicosis engxenyeni yesibili yokukhulelwa, ihambisane ne-edema nokucindezela okukhulu;
ukuphelelwa yisifo sofuba - ukukhubazeka kwezinso;
umonakalo ohlukahlukene ku-retina wamehlo;
ilungiselelo elingalungile le-fetus;
ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
I-General Anesthesia yeMvelo
Nge-anesthesia ejwayelekile, ingane ikhansela ngokuphelele ukuqaphela. Isetshenziselwa ukungenelela kokuhlinzwa noma kulawo maso lapho i-epidural anesthesia ingenakwenziwa khona.
Lapho ukhetha i-anesthesia, odokotela baqondiswa izici eziningana: ukuqinisekisa ukuphepha okukhulu kwengane nokubeletha, kanye nempilo yomama ozayo.
Amanzi akhuthaza inqubo yokubeletha, amantombazane amaningi kangaka akhetha le ndlela yokusiza abasebenzi. Ukugeza okujwayelekile ngamanzi afudumele kungasetshenziswa ngokuphelele esikhundleni sezinhlayiya. Ngaphambi kokuqala kwempi ngayinye, kubalulekile ukuba uqhube emanzini ukuze isisu sigubungele ngokuphelele. Kodwa akukho cala ongayilala emhlane wakho - lokhu kuzokwenza kube nzima ukuvula umlomo wesibeletho. Kubalulekile ukucabangela ukuthi kungenzeka ukubeletha kuphela kuba khona bezokwelapha, uma kudingeka, bangasiza ngokushesha.
Kubalulekile futhi ukuqapha izinga lokushisa kwamanzi, akufanele kudlule ukushisa komzimba wakho. Uma kungekho okugeza, khona-ke ungasebenzisa i-shower evamile. Vele uvule futhi uqondise i-jet yamanzi esiswini sakho. Uma amanzi esivele ehamba, khona-ke njengoba amanzi anesifo somzimba angasebenzisa kuphela ukugeza, kodwa kunoma yikuphi okungekho ukugeza.
Ukuphumula kwengqondo ngesikhathi sokulethwa
Ukucindezeleka nokucindezeleka kwengqondo ngesikhathi sokubeletha kungaholela ekuthuthukiseni ubuhlungu obukhulu kakhulu. Ukuze ugweme lokhu, udinga ukuqonda ngaphambi kokuzalwa kwenqubo ekhethekile yokuphumula kwengqondo: ukuphefumula okufanelekile, isimo esifanele somzimba, ukusikhipha umzimba nokunye okunye.
Kufanele uzilungiselele kusengaphambili. I-Nestoit igxile ebuhlungu, cabanga ukuthi ingane izozalwa ngokushesha kakhulu, futhi ungayigcina, cabanga ngezikhathi ezimnandi. Ungakwazi ngisho nasendleleni yokubeletha ingane.
Lapho ulwa, ungazama ukuthola umzimba okhululekile wendawo, ezokwenza ukunciphisa ubuhlungu. Squat futhi usakaze amadolo akho kabanzi. Uma lokhu kungakhathazeki ngawe, ke uhlale phansi emadolweni akho futhi usakaze ngokubanzi ngangokunokwenzeka. Lokhu kukhulisa i-coccyx ebuhlungu. Ungakwazi futhi ukugxila kunoma yini: entanyeni yomyeni, ngemuva kombhede, umnyango we-jamb. Lesi sikhundla sinciphisa ukucindezeleka nobuhlungu buyokwehla.
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngemuva kokubeletha uma usondla
Ukuzala nokulahlekelwa isisindo kuyiqiniso, hhayi inganekwane!
Indlela yokukhetha ipompo lesifuba nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Uhlu lwamakhono omuntu wokwenza ngcono ukuthuthukiswa komsebenzi kanye nentuthuko
Ukuthanda izilwane njengendlela yemfundo
20, 30, 40, 50 - pluses yonyaka ngamunye
Indlela yokukhetha isikhwama esiphelele sekhabethe lakho lesuku zonke: izinketho ezinhle kakhulu
Njengoba owesifazane oyisimangaliso uGalot wase-Israyeli esetshenziswa isisebenzi sezempi waba ngumdlali we-actress
Ama-pancake amancane amazambane: izindlela zokupheka ngezinyathelo epanini lokuthosa nasehhavini
Yini engakutshela ngombala wezinwele zakho?